ACE inhibitors များစာရင်း - အသုံးပြုခြင်း၊ ဘုံအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေး ဖျော်ဖြေရေး ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဆီးဂိမ်း ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် နှိပ်ပါ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> ACE inhibitors များစာရင်း - အသုံးပြုခြင်း၊ ဘုံအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ACE inhibitors စာရင်း | ACE inhibitors ဆိုတာဘာလဲ။ | သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြသလဲ | အသုံးပြုသည် | အဘယ်သူသည် ACE inhibitors ယူနိုင်မလဲ? | ဘေးကင်းရေး | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး | ကုန်ကျစရိတ်
Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors များသည်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်းသို့မဟုတ်သွေးတိုးရောဂါကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ အခြားကျန်းမာရေးပြamongနာများအရလေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်သွေးပေါင်ချိန်ကိုစီမံရန်လိုအပ်သည်။
အထူးသဖြင့်သွေးတိုးရောဂါသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်လက္ခဏာမျှမပြသသောကြောင့်၊ သင်သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်မတွေ့မချင်းသင့်တွင်သွေးတိုးရောဂါရှိသည်ကိုမသိနိုင်ပေ။ နီးပါး လူကြီးတစ်ဝက် ယူအက်စ်တွင်မြင့်မားသောသွေးဖိအားရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာ, ကစီမံခန့်ခွဲရန်ရရှိနိုင်အများအပြားဆေးဝါးများရှိပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး ACE inhibitor အတန်းအစားသည်ကုသနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ACE inhibitors, သူတို့အသုံးပြုမှုနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ACE inhibitors စာရင်း
Aceon (perindopril) 30 ကိုနှုန်း $ 76,4မီလီဂရမ်ဆေးပြား perindopril ကူပွန်ကိုရယူပါ Perindopril အသေးစိတ်ကို
Capoten (captopril) 30 ကို $ 55, 25 မီလီဂရမ်ဆေးပြား captopril ကူပွန်ကိုရယူပါ Captopril အသေးစိတ်ကို
Prinivil, Zestril (lisinopril) 30 ကိုနှုန်း $ 133, 10 မီလီဂရမ်ဆေးပြား lisinopril ကူပွန်ကိုရယူပါ Lisinopril အသေးစိတ်
Vasotec (enalapril) 30 ကိုနှုန်း $ 69, 10 မီလီဂရမ်ဆေးပြား enalapril ကူပွန်ကိုရယူပါ Enalapril အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Lotensin (benazepril) 30 ကို $ 37, 10 မီလီဂရမ်ဆေးပြား benazepril ကူပွန်ကိုရယူပါ Benazepril အသေးစိတ်
Mavik (trandolapril) 30 ကို $ 52,4မီလီဂရမ်ဆေးပြား trandolapril ကူပွန်ကိုရယူပါ Trandolapril အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Monopril (fosinopril) 30 ကိုနှုန်း $ 42, 20 မီလီဂရမ်ဆေးပြား fosinopril ကူပွန်ကိုရယူပါ Fosinopril အသေးစိတ်ကို
Altace (ramipril) 30 ကိုနှုန်း $ 59, 10 မီလီဂရမ်ဆေးပြား ramipril ကူပွန်ကိုရယူပါ Ramipril အသေးစိတ်ကို
Accupril (quinapril) 30 ကိုနှုန်း $ 58, 40 မီလီဂရမ်ဆေးပြား quinapril ကူပွန်ကိုရယူပါ Quinapril အသေးစိတ်ကို
Univasc (moexipril) 30 ကိုနှုန်း $ 65, 15 မီလီဂရမ်ဆေးပြား moexipril ကူပွန်ကိုရယူပါ Moexipril အသေးစိတ်
ACE inhibitors ဆိုတာဘာလဲ။
ACE inhibitors များသည်သွေးကြောများနှင့်သွေးလွှတ်ကြောများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချပေးသောဆေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒီဆေးတွေက angiotensin II လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်စေတယ်။ ဒီဟော်မုန်းကသင့်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုကျဉ်းစေတာ၊ သွေးကြောများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ACE inhibitors သည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးစေပြီးနှလုံးအတွင်းလုပ်ငန်းပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ပြproblemsနာ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်သွေးကြောများနှင့်သွေးစီးဆင်းမှုတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသောသူများအားဤဆေးများကိုမကြာခဏပေးလေ့ရှိသည်။
ဘယ်လို ACE inhibitors အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
ACE inhibitors များသည် angiotensin I ကို angiotensin-converting အင်ဇိုင်းကိုပိတ်ဆို့သည်။ Angiotensin II သည်အစွမ်းထက်သောဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသွေးကြောများရှိကြွက်သားများကိုကျုံ့စေပြီးသွေးကြောများကျဉ်းစေပြီးသွေးပေါင်ချိန်တက်စေသည်။
ACE inhibitors သည် angiotensin II ထုတ်လုပ်မှုကိုပိတ်ဆို့သောအခါသွေးကြောများသည်သွေးကိုပိုမိုလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းစေရန်တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ACE inhibitors ဖြင့်ကုသခြင်းသည်သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ သွေးကြောနံရံများပျက်စီးခြင်းနှင့်နှလုံးနှင့်ကျောက်ကပ်များသို့စီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ်သွေးတိုးရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကျောက်ကပ်ရောဂါတိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။
အဘယျသို့ ACE inhibitors ကိုအသုံးပြုသလဲ။
ACE inhibitors ကိုအဓိကကုသရန်အသုံးပြုသည် သွေးတိုးရောဂါ အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများကိုလည်းကုသနိုင်သည်။
နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ်နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများတွင် ACE inhibitors သည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ပြcomplနာများ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ပထမအဆင့်ကုထုံးဖြစ်သည်။ ACE inhibitors များသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲနှလုံးရောဂါကာကွယ်နိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်ဤဆေးများသည်နှလုံးကိုသွေးတိုးရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ACE inhibitors သည်အခြားဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည် Diuretics ဆီး သို့မဟုတ်ကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers ။
အဘယ်သူသည် ACE inhibitors ယူနိုင်မလဲ?
လူကြီးများတွင်သွေးတိုးရောဂါကိုကုသရန် ACE inhibitors များကိုအသုံးပြုသည်။ ACE inhibitor သည်အသက် ၆၀ အောက်နှင့်အာဖရိကန်မဟုတ်သောအရွယ်ရောက်သူများအတွက်ပထမအဆင့်ကုသမှုဖြစ်သည်။ ACE ကို inhibitors ဖြစ်လေ့ရှိသည် လျော့နည်းထိရောက်သော အာဖရိကန်အမေရိကန်လူ ဦး ရေအတွက်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသည့်အရွယ်ရောက်သူများကိုဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားသူများ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန် ACE inhibitor ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ကလေးများတွင်သွေးတိုးရောဂါကိုကုသရန် ACE inhibitors များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါရှိသည့်ကလေးများအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သောဆေးဖြစ်သည်။ အာဖရိကမျိုးရိုးမှကလေးများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောစတင်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ Lotensin နှင့် Prinivil ကဲ့သို့ ACE inhibitors အများအပြားသည်အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်ဖော်မြူလာငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များအတွက်လည်းလုံခြုံသည်။ ဥပမာ Capoten ကိုနို့စို့ကလေးများနှင့် Vasotec ကိုတစ်လနှင့်အထက်ကလေးများအားပေးကောင်းပေးလိမ့်မည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ACE ကိုတားဆီးနိုင်သောဆေးများကိုသောက်သုံးနိုင်သော်လည်းငယ်ရွယ်သောအရွယ်များထက်သေးငယ်သည့်ဆေးပမာဏလိုအပ်နိုင်သည်။ စတင်သုံးစွဲသောဆေးများသည်အနိမ့်ကျ။ လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်တဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်သို့တက်သည်။
ACE inhibitors သည်လုံခြုံပါသလား။
ယေဘုယျအားဖြင့် ACE inhibitors များသည်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းယူသောအခါလေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်နှင့်ဘေးကင်းသည်ဟုယူဆသည်။ သို့သော် ACE inhibitors ကိုမသောက်သင့်သောလူအုပ်စုအနည်းငယ်ရှိသည်။
ပြင်းထန်သောကျောက်ကပ်ပျက်ကွက်မှုရှိသူများသည် ACE ကိုတားဆီးဟန့်တားမှုမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ဤလူ ဦး ရေတွင် ACE inhibitor ကိုအသုံးပြုပါကကျောက်ကပ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ပြင်းထန်သောအဖုအထစ်များဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာနှင့်ပါးစပ်ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကြောင့်ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုရှိသူများသည်လည်း ACE inhibitor ကိုမသောက်သုံးသင့်ပေ။
အချို့သောဆေးများသည် ACE inhibitors ၏ထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဝေးထိန်း (OTC) non-steroidal anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ (NSAIDs) ACE inhibitors ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ NSAID များကို ACE inhibitors နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ACCE inhibitor မသောက်မီ OTC ဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်ဆေးပင်များကဲ့သို့သောဆေးဝါးများအကြောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ပြောဆိုပါ။
ACE inhibitor ပြန်ပြောပြသည်
မတ်လ ၂၀၂၁ တွင် ACE inhibitor ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုမရှိပါ။
ACE inhibitor ကန့်သတ်
အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့် ACE inhibitor ကိုမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုရှိပါက ACE inhibitors ကိုမသောက်ပါနှင့်။ သင် angioedema (အုံနှင့်တူသောအရေပြားအောက်တွင်ရောင်ရမ်းခြင်း) ကြုံတွေ့ဖူးပါက ACE inhibitors ကိုမသောက်ပါနှင့်။
Entresto (sacubitril / valsartan) သောက်နေတဲ့လူနာတွေ၊ neprilysin inhibitor ပါ ၀ င်တဲ့ဆေးတွေဟာ ACE inhibitor ကိုမသောက်သင့်ဘူး။ Entresto သည် ACE inhibitor သို့ပြောင်းခြင်းမှ ၃၆ နာရီအတွင်းမယူသင့်ပါ။
ပြင်းထန်သော aortic stenosis ရှိသူများသည် ACE inhibitors များကိုသောက်သုံးသူများသည် ischemia ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောများကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်နှလုံးကြွက်သားသို့သွေးစီးဆင်းမှုလျော့နည်းခြင်းများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နေစဉ် ACE inhibitors များကိုသောက်နိုင်ပါသလား။
ACE inhibitor class သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးရန်အနက်ရောင်သေတ္တာကိုသယ်ဆောင်သည်။ ACE inhibitors သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသန္ဓေသားအားအနာနှင့်သေစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ACE inhibitors များသည်မိခင်နို့သို့ကူးသွားနိုင်ပြီးနို့တိုက်စဉ်ရှောင်ရှားသင့်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်နို့တိုက်နေစဉ် ACE inhibitor မသောက်မီသွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်းအတွက်ကုသမှုနည်းလမ်းများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ACE inhibitors များသည်တ္ထုများကိုထိန်းချုပ်ထားပါသလား။
အဘယ်သူမျှမ, ACE inhibitors ပစ္စည်းဥစ္စာထိန်းချုပ်ထားကြသည်မဟုတ်။
ဘုံ ACE inhibitors ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
ACE inhibitors ၏အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်း (သို့) ထွက်သွားခြင်းဖြစ်စဉ်များသည်ပထမ ဦး ဆုံး ACE inhibitors ဆေးများနှင့်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ACE inhibitor ကိုစတင်သောအခါ volume-depleted တစ် ဦး ချင်းစီ၌ဤအရာသည်ပိုမိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အရည်မညီမျှမှုတစ်ခု ACE inhibitor မစတင်မီတညျ့ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ACE inhibitors ၏ပိုမိုပြင်းထန်သော်လည်းရှားပါးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် -
ရှားပါးသော်လည်း ACE inhibitors များသည်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်သည်။ တစ်ခုမှာဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည် angioedema မျက်နှာ၏အရေပြား (သို့) အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအောက်တွင်ရောင်ရမ်းခြင်း။ ACE inhibitors များကိုမတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုသည်ရှားပါးသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ACE inhibitors သည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်ကုသမှုခံယူစဉ်အတွင်းသင့်ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းကိုပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။
ACE inhibitors သည်သွေးပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအကြောင်းရင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည် hyperkalemia (ပုံမှန်ထက်ပိုတက်စီယမ်အဆင့်များမြင့်ခြင်း) ထို့ကြောင့် ACE inhibitor ကိုသောက်နေစဉ်ပိုတက်စီယမ်စားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ပိုတက်စီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသောက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ် ACE ကိုတားဆီးပေးသောပိုတက်စီယမ်ပါဝင်သောဆားအစားထိုးအသုံးပြုခြင်းသည် hyperkalemia ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြားကျန်းမာရေးပြtoနာများဖြစ်ပေါ်စေပြီးအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ပိုတက်ဆီယမ်အလွန်များခြင်းရှိခြင်း၏လက္ခဏာများတွင်လက်နှင့်မျက်နှာများတွင်ရှုပ်ထွေးမှုများ၊ မမှန်သည့်နှလုံးခုန်ခြင်း၊
ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏စာရင်းသည်ပြည့်စုံမှုမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနှင့်စကားပြောခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအားလုံး၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုရရှိရန်နှင့် ACE inhibitors ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်သင့်လျော်ခြင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ACE inhibitor မယူမီအောက်ပါတို့မှတစ်ခုခုကိုသင့်ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။
သငျသညျအစဉျအမွဲ angioedema ကြုံတွေ့ဖူးလျှင်
အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံး ၃၆ နာရီအတွင်းတွင် sacubitril ပါ ၀ င်သောဆေးကိုသောက်ပါက
ACE inhibitors တွေကဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ။
ACE inhibitors များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျဖော်မြူလာများတွင်ရရှိနိုင်သောတတ်နိုင်သောဆေးများဖြစ်သည်။ Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်အားလုံးနီးပါးသည် ACE inhibitors များကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏အာမခံအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ အာမခံမရှိပါကစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းသည်ဆေးနှင့်ဆေးပြားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဆေးညွှန်းလျှော့စျေးကဒ် SingleCare မှ ACE inhibitors ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ကူညီလိမ့်မည်
planbဆေးပြားသည်မည်မျှကြာကောင်းသနည်း